10 vidiny herinaratra herinaratra XhUMX hp, motor 10 hp amidy
Mpamatsy moto herinaratra 10 hp amidy amin'ny vidiny tsara indrindra
10 HP Tanjona ankapobeny
Mamatsy herinaratra indostrialy
Motera elektrika 10 hp, motera elektrika 10 hp 12v, motera elektrika 5 hp, motera herinaratra 10 hp ho an'ny compresseur rivotra, haben'ny herinaratra herinaratra 10 hp, herinaratra motera elektrika 10 hp, motera elektrika 10 hp 3 amp amp hisarihana. Amin'ny maha-mpamatsy motera herinaratra eran-tany dia manolotra karazana AC Motors sy DC Motors isan-karazany izahay.
Môtô elektrika mahery vaika 10 hp, maotera elektrika 10 hp dc, onja feno ho an'ny 460 volt, 230 volt ary 115 volts 10 hp herinaratra elektrika amp 10, herinaratra elektrika ho an'ny sambo , Motera elektrika 10 hp 10v, manana ny laharam-pahefana elektrika 12 hp mitovy amin'ny motera elektrika 10 hp isika, motera elektrika 5 hp dingana iray, ny lanjan'ny motera elektrika 10 hp dia 10 lbs. ho an'ny karazana poleta 231 hp herinaratra elektrika ho an'ny compresseur rivotra, motera herinaratra 4 hp amidy, herinaratra motera elektrika 10 hp ho an'ny fanombohana avo. Ho an'ny sary moto elektrika 10 hp 10 phase amp, halefa miaraka amin'ny motera izahay.
ny vidin'ny moto herinaratra 10 hp-tsika dia tena mifaninana ary ny vidin'ny fividianana motera mandeha amin'ny angovo. Hanampy anao izahay rehefa misafidy motera elektrika 10 hp hisolo ny mpampita, paompy na fitaovana hafa. Motera elektrika 10 hp 3 amidy, Mba hahalalana hoe ohatrinona ny vidin'ny motera elektrika 10 hp, azafady mifandraisa anay avy hatrany.
Habe moto herinaratra 10 hp
10 hp herinaratra amp;
10 motera herinaratra hp ho an'ny compressor amin'ny rivotra
Sambo sambo motor 10 hp
10 hp motera herinaratra 12v
10 motera herinaratra hp
Telo Dingana Premium Mahomby 10 hp herinaratra 3 herinaratra dingana 10, ary koa toy ny mpanamboatra karazana motera herinaratra 10 hp. Modely sasany ho an'ny motera elektrika XNUMXhp izay azonay omena ihany koa.
Tahaka ny motera herinaratra 2 hp 1725 rpm dingana tokana, motera elektrika 3 hp 1725 rpm dingana tokana, 1.5 hp motera herinaratra mandeha irery no azon'izy ireo ampiasaina ho adidin'ny motera elektrika 3 hp.
Ny anay dia mora kokoa noho ny vidin'ny motera abb 10 hp, moto herinaratra 10 hp mihidy tanteraka, 1000rm, 1750rpm, 3600 rpm sns izay fanamboarana mekanika henjana. Mba hahazoana vidin'ny motera 10 hp 3 dingana any Shina, tongasoa ny manontany anay.
Tongasoa eto amin'ny fanontanianao amin'ny fotoana rehetra.